La Cabana Carmelita - I-Airbnb
Kings Beach, California, i-United States
Ikhabethe elithandekayo, elihle nelithokomele elingu-1 elinokubukwa kwechibi elishanelayo kanye nompheme omkhulu ofakwe ilanga. Indawo yokungena yangasese, ukugeza okugcwele kanye nekhishi. Indawo ekahle yekhofi yasekuseni nama-cocktails wakusihlwa. Ukushona kwelanga ukufela. Ukuhamba kalula ukuya edolobheni, amabhishi angcono kakhulu, ama-trailheads namakhasino. Ababungazi bendawo besikhathi eside bathanda ukukubonisa indawo ozungezile.
Ekuqaleni kwawo-1950 ikhabethe elilodwa lokulala elinompheme omkhulu, oshiswe yilanga, elibheke iLake Tahoe elihle, eliyigugu lasolwandle. Kuhle futhi kuthokomele ngaphakathi ngekhishi elincane elihlome ngokuphelele, umpheme omkhulu onefenisha ye-patio ukujabulela ilanga nokubukwa, nokufinyelela kalula emabhishi nasedolobheni. I-grill yegesi emphemeni futhi. Sicela uqaphele: iziko lenzelwe izinjongo zokuhlobisa kuphela
4.90 · 426 okushiwo abanye
Indawo engcono kakhulu ye-Kings Beach. Phezulu egqumeni phakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya edolobheni, emabhishi, namakhasino omugqa kahulumeni, ukuhamba ngaphansi kwemizuzu eyi-10 ukuya kuzo zonke izinsiza. Imigwaqo elungele izinja nezingane enethrafikhi encane ebheke enyakatho yechibi blvd ngezansi. Ukufinyelela kalula ohlelweni olukhulu lwe-trail olulungele ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukugijima umzila noma ukuhamba izintaba.
Abantu bendawo abanesikhathi eside nabahambi abanesibindi abanalo lonke ulwazi lwangaphakathi emabhishi, imizila, ukugibela, izindawo zokudlela nokuzijabulisa. UDavid usebenza kwenye yezindawo zokudlela ezihamba phambili ogwini olusenyakatho kanti uMeghan ungumasaji ogunyazwe yibhodi. Siyajabula ukwabelana nge-beta, izindaba neziphuzo ezibandayo uma uthanda.
Abantu bendawo abanesikhathi eside nabahambi abanesibindi abanalo lonke ulwazi lwangaphakathi emabhishi, imizila, ukugibela, izindawo zokudlela nokuzijabulisa. UDavid usebenza kwen…
Hlola ezinye izinketho ezise- Kings Beach namaphethelo